अर्नोल्ड पामर निमन्त्रणा गोल्फ टूर्नामेंट
विजेता र इतिहास संग राजाको पीजीए टूर घटना
टूर्नामेंटको पूरा नाम अर्डोल्ड पाल्मर निमन्त्रणात्मक प्रस्तुति हो। मास्टरकार्ड, टूर्नामेंट नाम 2007 मा सुरु भएको थियो। एक दर्जन वा साता वर्षको लागि, यसको होस्ट हिल निमन्त्रणाको रूपमा ज्ञात भयो। अर्नोल्ड पाममर लामो समयदेखि यो टूर्नामेंटको होस्ट हो, र बे हिलसँगको सम्बन्ध पछि दशकौं अघि बढ्छ।
अर्नोल्ड Palmer निमन्त्रणा एक 72-छेद स्ट्रोक खेल टूर्नामेंट हो जुन सामान्यतया मार्च-मा मध्य मा पीजीए टूर कार्यक्रममा लाग्छ।
रोरी म्याक्रोयले पहिलो टूर्नामेंटको लागि 64 को स्कोर संग बन्द गर्यो र 192016 टुर च्याम्पियनशिपबाट पहिलोपटक पीजीए टूरमा जित्न सफल भयो। यो McIlroy को 14 औं क्यारियर पीजीए टूर विजय थियो। McIlroy 18 -70 भन्दा कम अन्तर्गत समाप्त भयो। रनर अप-अप, ब्रासन डीकमहाउले तीन स्ट्रोक फिर्ता गरे।
2017 अर्नोल्ड पामर निमन्त्रणा
मार्क लिसम्यानले तेस्रो-राउन्ड नेदरल्यान्ड्स केविन किस्नर र चार्ली होफमनलाई फाइनल राउन्डमा एक स्ट्रोकबाट जिते। लिसम्यानले प्रत्येक किसिमको क्यानरर र होफमनद्वारा 69 गोल49 73 मा शतक बनायो। लशिमा 11-9 अन्तर्गत समाप्त भयो। यो उनको दोस्रो क्यारियर थियो पीजीए टूर जित्यो।
जेसन डेले तार को तार विजेता प्रदर्शनमा परिणत गर्यो, जसलाई विजय हासिल गर्न मद्दतको लागि 71 औं छेदमा बर्डी सहित। डेभलप च्यापेलको अन्तिम-छेद बोगीसँग मिलेर ब्याटिङ गरेको अन्तिम दिनको लागि पनि आजको आवश्यकता चाहिन्छ, 1-शट जितको उत्पादन गर्यो। डेभलपमेण्टका लागि 1719को अन्तमा उनले आठौं क्यामेरा पीजीए टूर टूर्नामेंट जिते र उनको 2015 को फेब्रुअरी पछि देखि छ।
आर्नोल्ड पामर निमन्त्रणामा टूर्नामेंट रेकर्ड
स्कोरिंग, 72 छेद: 264 - पेन स्टीवर्ट, 1987
स्कोरिंग, 18 छेद: 62 - एन्डी बीन, 1981; ग्रेग नरम, 1984; आदम स्कट, 2014
जीत: 8 - टाइगर वुड्स
अर्नोल्ड पामर निमन्त्रणा गोल्फ कोर्स
अर्नोल्ड पामर निमन्त्रणा बे हिल क्लबमा खेलेको छ र 1971 पछि हरेक वर्ष गोल्फ कोर्स लजाइएको छ।
त्यसअघि, टूर्नामेंट - उस समय फ्लोरिडा निवासी ओपन निमन्त्रणाको रुपमा चिनिन्छ - ओर्लान्डोको रियो प्यानर देश क्लबमा खेलेको थियो।
यो पनि हेर्नुहोस्: 1965 मा बेल हिलको अर्नोल्ड पाममरको पहिलो भ्रमणको तस्बिर
अर्नोल्ड पामर निमन्त्रणात्मक त्रिविया र टिप्पणीहरू
टूर्नामेंट को आफ्नो खेल 2007 संग अर्नोल्ड पामर निमंत्रण को पुन: नामाकरण गर्यो। पीएमए टूर कार्यक्रमको लागि पामर मात्र दोस्रो गोल्फर हो। बायरन नेल्सन पहिलो थियो।
अर्नोल्ड पाल्मरले 1965 मा बे हिल क्लब र लज भ्रमण गर्न थाले, र यो उनको सर्दीको घर बनिन्। पामर 1975 मा क्लबको मालिक बनेको थियो, र 1 994मा पीजीए टुरले आफ्नो ओर्लान्डो कार्यक्रमलाई बे हिलमा सार्नको लागि आश्वस्त गरे।
पामर 41 वर्षको उमेर हुँदा उनले 1971 मा यो टूर्नामेंट जिते। यो उनको अन्तिम आधा दर्जनको बीचमा थियो वा त्यसमा पीजीए टूरमा जीत।
टूर्नामेंट पहिलो 1966 मा खेलेको थियो र लियोनेल हेबर्टलाई विजेता थियो। ज्याक निकलोउसले दोस्रो वर्षको अन्त्य गरे। निकलस पनि 1982 मा टेलर-अप भएको थियो, जब उनले टम किटमा खेल्न सकेनन्। निकलोउसले यो टूर्नामेंट कहिल्यै जितेन।
टाइगर वुड्स अर्नोल्ड पामर निमन्त्रणा चार सीधा वर्ष, 2000-03 को जीता। वाल्टर हेजन र जीन सरजेन एक मात्र अन्य गोल्फर हुन् जुन लगातार चार वर्षको कुनै पनि पीजीए टुर इभेन्ट जित्न सकिन्छ।
वुड्सका अलावा, यो टूर्नामेंट ब्याक टिम जित्ने मात्र अन्य गोल्फर लरेन रबर्ट्स (1994-99) र माट हर (2014-15) हो।
ट्रोर्नको अन्य 2-पटक विजेताहरू जेरी सुन (1972, 1974), गैरी कोच (1977, 1984) र अर्नी एल्स (1998, 2010) हुन्।
यस टूर्नामेंटमा कुल आठ सफलताको लागि टाइगर वुड्सले 2008-09 र 2012-13 मा पनि जित्यो। त्यो त्यही टूर्नामेंटमा धेरै जीतहरूको लागि सैम स्यादले सम्बन्ध राखेको थियो (सेनादले ग्रीटर ग्रीन्सबोरो आठ पटक जित्यो)। (सम्बन्धित: हेर्नुहोस् टाइगर वुड्स 'बे हिलमा जीतन्छ)
पीजीए टूर अनिल्ड पामर निमन्त्रणाको विजेता
(टूर्नामेंटको नाममा परिवर्तनहरू उल्लेख गरिएका छन्; p-playoff; w-weather short)
अर्नोल्ड पामर निमन्त्रणा
2018 - रोरी मैकइल्रो, 270
2017 - मार्क लेशमन, 277
2016 - जेसन डे, 271
2015 - म्याट्स हरेक, 26 9
2014 - म्याट हरेक, 275
2013 - टाइगर वुड्स, 275
2012 - टाइगर वुड्स, 275
2011 - मार्टिन लेयर, 280
2010 - एरनी एल्स, 277
2009- टाइगर वुड्स, 275
2008 - टाइगर वुड्स, 270
2007 - विजय सिंह, 272
बे हिल निमन्त्रणा
2006 - रड पामप्लिंग, 274
2005 - केनी पेरी, 276
2004 - चाड क्याम्पबेल, 270
2003 - टाइगर वुड्स, 26 9
2002 - टाइगर वुड्स, 275
2001 - टाइगर वुड्स, 273
2000 - टाइगर वुड्स, 270
1999 - टिम हेर्रोन-पी, 274
1998 - एरनी एल्स, 274
1997 - फिल मिकीसेन्स, 272
1996 - पॉल गोयोड्स, 275
1995 - लरेन रब्ब्स, 272
1994 - लरेन रबर्ट्स, 275
1993 - बेन क्रेन्सा, 280
1992 - फ्रेड जोडे, 26 9
1991 - एन्ड्रयू मेजे-डब्ल्यू, 203
1990 - रबर्ट गेमज, 274
1989 - टम पाइट-पी, 278
हर्ट्ज बे हिल क्लासिक
1988 - पल अजिंगर, 271
1987 - पेन स्टीवर्ट, 264
1986 - डैन फर्सम्यान-w, 202
1985 - फजी ज्वेलर, 275
बे हिल क्लासिक
1984 - गैरी कोच-पी, 272
1983 - माइक निकोलेटी-पी, 283
1982 - टम पाइट-पी, 278
1981 - एन्डी बीन, 266
1980 - डेभ एरिकहेबर, 27 9
बे हिल सिटरस क्लासिक
1979 - बॉब बेमानी-पी, 278
फ्लोरिडा Citrus ओपन निमन्त्रणा
1978 - म्याक मैकलेन्डन, 271
1977 - गैरी कोच, 274
1976 - हेल इरिविन-पी, 270
1975 - ली ट्रेविनो, 276
1974 - जेरी सुवेद, 273
1973 - बुड एलन, 265
1972 - जेरी सुवेद, 276
1971 - अर्नोल्ड पामर, 270
1970 - बब लन, 271
1969- केन अझै पनि, 278
1968 - डैन साइक्स, 274
1967 - जुलियस बोरोस, 274
1966 - लियोनेल हेबर्ट, 27 9
ब्रिटिश एमेच्योर च्याम्पियनशिप विजयी
ब्रिटिश ओपन प्लेऑफ्स
पीजीए वर्डन ट्रफी विजेता
'एेन कर्नर' के हो? यसमा कुन होलहरू समावेश छन्?
2016 यूएस महिलाहरूको खुला योग्यता स्कोर र समय तालिका
पीजीए टूर मा खेल्न सबै भन्दा पुरानो गोल्फफर
यूरोपीय भ्रमण मा अबू धाबी एचएसबीसी गोल्फ चैम्पियनशिप
सोनी ओपनमा हवाई गोल्फ टूर्नामेंट
राजवंशको माध्यमबाट टाओवादको इतिहास
उर्सुला के ले गुइन द्वारा 'त्यो अनमन्ट थि' को विश्लेषण
जहाज, च्याम्पेन, र असुविधा
प्रारम्भिक बचपन शिक्षाको एक सिंहावलोकन
प्रेमी सिटीको व्यवस्था
क्लासिक अन्तर्राष्ट्रिय हारभरी पिकअप ट्रकहरू
फ्रान्सेली भविष्यको सही
फ्रान्कलिन डी। रोस्वेल्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका को 32 वें राष्ट्रपति
हर्सेसो बन्डको युद्ध - क्रीक युद्ध
सामाजिक कार्यकर्ता के गर्छ?
शब्दावली संग शब्द शब्दावली खेलहरु को सूची
न्यूयर्क शहरमा माइक नाइट्स खोल्नुहोस्
हास्य जीवाणुहरू धेरै चाँडै गए
दिनको वचन - योकू
जीवविज्ञान उपसर्ग र असफिक्स: हेटर- वा हिटरो-
थाहा पाउने समय हो
यूएस ओपन टूर्नामेंटमा बेन होगनको अद्भुत रेकर्ड
"यो" व्याकरणमा डमी विषयको रूपमा
कसरी सुपर पीएसी सुरु गर्नुहोस्
कृत्रिम हृदयको इतिहास
'अमेरिकाको अर्को शीर्ष मोडेल' विजेता - अहिले तिनीहरूलाई हेर!
डोनाल्ड ट्रम्प र राम्रो सामरी